Xog: Beesha caalamka oo ka walaacsan saameynta Al-Itixaad ee xukuumadda Siilaanyo | Arrimaha Bulshada
Home News Xogwaran Xog: Beesha caalamka oo ka walaacsan saameynta Al-Itixaad ee xukuumadda Siilaanyo
Xog: Beesha caalamka oo ka walaacsan saameynta Al-Itixaad ee xukuumadda Siilaanyo
Saturday, July 22, 2017 News , Xogwaran
Bulsha:- Wakiilada reer galbeedka ee Somaliland ayaa ka walaacsan saameynta kooxda Al-Itixaad Al-Islaami ee kusii kordhaya maamulka madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo, sida ay sheegeen ilo-diblomaasiyeed.
Walaacan ayaa markii ugu horeysay soo shaac baxay dabaayaqadii sanaddii tagtay, markii wasiirka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi uu dibadbaxyo ka dhan ah Britain u adeegsaday hogaamiyayaasha kooxda Al-Itixaad ee Somaliland.
Ilo-diblomaasiyeed ayaa sheegay in markii Britain ay kasoo horjeesatay dib u dhigga ay Somaliland ku sameysay doorashada madaxweyne, uu Maxamuud Xaashi Cabdi abaabulay dibadbax ay qeyb ka ahaayeen hogaamiyayaasha Al-Itixaad ee Somaliland, oo looga soo horjeeday safiirkii hore ee Britain ee Somalia Hurriet Mathews.
Bilo kadib ayaa Maxamuud Xaashi Cabdi, waxa uu Siilaanyo ka dhaadhiciyey in xubno Al-Itixaad ah ay ka mid noqdaan golaha diinta Somaliland, waxaana ka mid ah Xasan Sheekh Cali Warsame, oo uu dhalay Sheekh Cali Warsame, oo ah ninkii aas-aasay kooxda Al-Itixaad.
Xiriirka reer galbeedka iyo Somaliland ayaa sidoo kale sii xumaanayey tan iyo markii Somaliland ay ku guul-darreystay inay qabato doorashada madaxweyne, oo waqtigooda dib uga dhacday muddo ku dhow labaatan sano.